Anjara sy tanjona - Mahakasika ny tetikasa PADAP
Ny tetikasa PADAP dia novolavolaina hotanterahina mandritra ny fotoana maharitra. 20 taona eo ho eo no ilaina hamitana ireo dingana telo amin’ny tetikasa.
Ireo tanjona napetrak’ireo mpiandraikitra ny tetikasa PADAP
Ny tanjon’ny tetikasa PADAP dia ny fampihenana ny fahasimban’ny harena voajanahary asy ny fampitomboana ny lanjan’ny famokarana eo amin’izany sehatra izany. Ny Ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana (MPAE),ny Ministeran’ny tontolo iainana, ny ekolojia ary ny ala (MEEF) ary ny Ministeran’ny rano ,fanadiovana sy ny fidiovana (MEAH) dia niasa mafy nanomboka ny taona 2017, tamin’ny fanapariahana sy fanamoarana ny fampidirana ny rano, ny fanmpivoarana hatrany ny teknika sy ireo fomba fanao maharitra. Ireo andrim-panjakana dia miasa ihany koa amin’ny fanamafisana ny fitantanana ny harena voajanahary amin’ireo velaran-tany kendrena.
Ny fanantanterahana ireo dingana telo
Misy dingana telo hampiharina mandritran’ny 20 taona, entina anatanterahana ny tetikasa PADAP. Ny dingana voalohany dia mikendry ny fanamafisana ny fahaizan’ireo andrim-panjakana sy ny fanohanana ny fampiasam-bola amin’ireo faritra dimy voafantina: Andapa, Sonierana Ivongo , Iazafo,Bealanana ary Mrovoay. Izy io koa dia mikendry ny fanampiana ny sehatra mpandray anjara rehetra hamokatra sy hampiasa ireo fahalalana azo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny sehatry ny tontolo.
Ny dingana faharoa eo anivon’ny tetikasa PADAP dia ny fanamafisana ny tobim-baovao sy ireo andrim-panjakana amin’ny lafiny iray. Ity hetsika ity dia mikendry indrindra ny hampiroborobo ny fampidirana ny fambolena sy ny fampiasana tsara ny harena voajanahary mba hanitarana ny fampiasam-bola amin’ny tontolo vaovao.
Rehefa tonga amin’ny dingana fahatelo sady farany ireo mpisehatra amin’ny tetikasa PADAP dia andraikitr’izy ireo ny fanamafisana ny fampiasam-bola amin’ny tontolo izay ampiharina ny tetikasa, ary mandritra izany fotoana izany dia hisy ny fanamafisana ireo ezaka efa natao. Amin’izay fotoana izay, imasoana kokoa ny fanamafisana ny fitantanana sy ny fampiasam-bola, ary efa tontosa ny fananganana ny toha-baovao, ny fametrahana drafitra ary ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra.